संसद विघटनपछि चिनियाँ नेता नेपालमा, के हो चिनको चासो ? « Lokpath
२०७७, १३ पुष सोमवार ०६:५०
संसद विघटनपछि चिनियाँ नेता नेपालमा, के हो चिनको चासो ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १३ पुष सोमवार ०६:५०
काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहेको बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन्देश बोकेर नेपाल आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउको टोलीले राजनीतिक भेटघाट थालेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेलेका उपमन्त्री येझाउ नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको बेला नेपाल आएका हुन् ।
चिनियाँ टोलीले नेकपाका नेतालाई पद छाडेर भए पनि पार्टी एकता कायम राख्न सुझाव दिएको बुझिएको छ । तर नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण पछिल्लो समय एक पक्षले अर्को पक्षको कुरा सुन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा विभाजनको विषयमा एक शब्द नबोलेको चीनले अकस्मात् पठाएको चिनियाँ टोलीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने चासोको विषय रहेको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
ताण्डवका डाइरेक्टरले माफी मागे
छोरीको जन्मपछि कोहलीले चेन्ज गरे ट्वीटर बायो
अमेरिकामा नयाँ सरकार : मन्त्री बन्नको लागि चुनाव जित्न जरुरी…